Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Ahoana ny fandehanana miaraka amin'ny Omicron Strain COVID Vaovao?
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ity toro-hevitra ity dia tonga roa andro taorian'ny nifoha an'izao tontolo izao tamin'ny karazana Coronavirus hafa, fantatra amin'ny anarana hoe Omicron, na ara-teknika ny variana B.1.1.529.
The World Health Organization Niangavy ireo mpitondra eran'izao tontolo izao mba tsy handray anjara amin'ny fihetsiketseham-panoherana amin'ny lohalika ary nampitandrina ny amin'ny fametrahana ny famerana ny dia rehefa nipoitra ny vaovao momba an'i Omicron.
Manimba manokana ny indostrian'ny fizahantany maneran-tany izany tamin'ny fotoana namirapiratan'ny hazavana mamirapiratra. Ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany any Londres na IMEX any Las Vegas dia vita soa aman-tsara. Niteraka sidina iraisam-pirenena vaovao, fisokafan'ny hotely, ary fampiroboroboana fizahan-tany maneran-tany ny fahatsapana fanantenana.
Io fanantenana io dia rava tao anatin'ny ora roa andro lasa izay raha nanomboka nanakatona avy hatrany ny dia mankany Afrika Atsimo ireo firenena eoropeana. Narahin'ny fandrarana fitsangatsanganana amerikana notarihin'ny filoha Biden izany.
Araka ny fanambarana an-gazety navoakan'ny Minisiteran'ny Fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa afrikanina tatsimo, ilay karazany vaovao no hita voalohany tany Botswana, faharoa tany Afrika Atsimo.
Efa nandeha tany Alemaina, Holandy, Hong Kong, nentin'ireo mpandeha tamin'ny sidina iraisam-pirenena. Ity otrikaretina ity ao anatin'ny iray andro dia tsy olana mitokana any Afrika Atsimo.
Na dia nihetsika tao anatin'ny ora maro aza ny firenena anisan'izany i Royaume-Uni tamin'ny fanakatonana sisintany, nanafoana ny sidina teo anelanelan'i Angletera sy Afrika Atsimo, dia tsy nahasakana ity viriosy ity tsy hiampita iraisam-pirenena izany. Efa tany Eorôpa sy Hong Kong izy io talohan'ny tsy nahafantaran'izao tontolo izao akory izany.
Ny Fanjakan'i New York, firenena amerikanina tatsimo Kolombia dia nanambara ny hamehana ara-pahasalamana mifototra amin'ity tsimokaretina vaovao ity, na dia mbola tsy misy tranga aza izy ireo.
Io fironana amin'ny famerana ny sidina mankany Afrika Atsimo izao dia mampitoka-monina an'i Afrika Atsimo, manakatona ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany. Vao androany Qatar ary na i Seychelles aza dia nanambara ny fanakatonana ny sisintany sy ny fifandraisan-davitra.
Arabia Saodita, na izany aza, dia nanambara fotsiny fa hamela ny fidirana amin'ireo mpandeha avy amin'ny firenena rehetra, raha mbola nahazo fatra iray amin'ny vaksiny COVID-19 izy ireo. Nampiato ny sidina nankany Afrika Atsimo, Namibia, Botswana, Zimbaboe, Mozambika, Lesotho, ary Eswatini anefa ny Fanjakana.
Ny Netherlands ary firenena maro hafa no mihidy.
… fa ahoana?
Anita Mendiratta, mpanolotsainan'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili omaly dia nanoratra ity bitsika ity ho an'ny lehibeny, izay navoakany tao amin'ny Twitter-ny hoe:
Ny traikefa dia naneho fa ny fomba fiasa ara-tsiansa mifototra amin'ny risika dia fomba iray tokony handehanana: Mba hiarovana ny olona tsy hanapaka ny lalan'ny fizahan-tany.
Manaratsy firenena sy faritra manontolo ny famerana ny dia, mampidi-doza ny asa ary manimba ny fahatokisana. Izy ireo no vahaolana farany, fa tsy valiny voalohany.
Mazava ho azy fa tsy maintsy manaiky ny fanambaran'i Zurab andro vitsivitsy talohan'ny fivoriamben'ny UNWTO tsy mbola nofoanana tao Madrid izay rehetra tia fitsangatsanganana, na manome serivisy fitsangantsanganana, saingy tsy misy vahaolana amin'izany ireo teny ireo.
Ny World Tourism Network dia te-hanolotra fomba fiasa vaovao, mifototra amin'ny sccientific scence, ary ny tanjona ny hitazonana ny dia sy ny fizahan-tany.
Ity soso-kevitra WTN ity dia ankoatry ny fanosehan'ny fikambanana ny fitoviana amin'ny fidirana amin'ny vaksiny amin'ny firenena rehetra ary mitaky vaksiny handehanana.
Tsy mety ho ampy ny vaksiny any Etazonia sy Eoropa, 30 isan-jato na mihoatra ny tahan’ny fandavana, raha tsy misy afa-tsy 7% eo ho eo no vita vaksiny any amin’ny faritra maro any Afrika, ary maniry mafy ny hahazo izany fiainana izany ny olona. -mamonjy vaksiny.
Dr. Peter Tarlow, filoha WTN
Ny tahan'ny vaksiny ambany noho ny fisian'ny vaksiny dia marina ihany koa any amin'ireo firenena kilaometatra vitsivitsy miala ny sisintanin'i Etazonia, anisan'izany ireo firenena Karaiba.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany dia manentana ny UNWTO, OMS, WTTC, IATA, governemanta, ary ny indostrian'ny fitsangatsanganana mba hanosika fomba hafa kely hivoahana amin'ny olana. Mahatsapa ny WTN fa tsy handrava ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany tena ilaina io fomba fiasa io, ary hamela fomba fiasa feno fanantenana ho an'ity indostria ity hiasa sy hiroborobo miaraka amin'ny COVID-19.
Ny fomba fiasa toy izany dia niasa ho an'ny firenena sasany, anisan'izany i Israely.
Alohan'ny sidina iraisam-pirenena rehetra dia mila fitiliana PCR haingana eny amin'ny seranam-piaramanidina na ao anatin'ny 24 ora alohan'ny hiaingana, eny fa na dia ho an'ireo vita vaksiny tanteraka aza.
Omeo toky fa efa vita vaksiny tanteraka ny olona rehetra ao anaty sidina iraisam-pirenena.
Influenca dia karazana Coronavirus ary matetika dia tsy azo avahana amin'ny COVID-19, ka mahatonga ny mpandeha hanao vaksiny amin'ny tazomoka, indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny setroka.
Ny fitiliana PCR haingana dia fomba vaovao kokoa amin'ny fitiliana ny Covid-19 izay nankatoavin'ny FDA vao haingana. Ny fitiliana PCR haingana dia endrika vaovao mampientam-po amin'ny fitiliana Covid satria izy ireo dia manambatra ny fahamarinan'ny fitsapana PCR sy ny fotoana fihodinana haingana amin'ny fitsapana haingana. Mazàna 15 minitra eo ho eo vao misy valiny ireo fitiliana Covid ireo.
Ny fitiliana PCR haingana dia safidy tsara ho an'izay mila valiny marina haingana, toy ny olona mila valiny amin'ny dia ao anatin'ny 15 minitra miala ny fiaingana, na rehefa misy soritr'aretina Covid-19.
Ny fitiliana PCR haingana dia diagnostika nasal swab. Izy ireo dia miasa amin'ny alàlan'ny fitadiavana fitaovana fototarazo manokana an'ny virus. Ny fitsapana PCR dia mitady ny fitaovana hita ao anatin'ny viriosy amin'ny ambaratonga molekiola, fa tsy mitady ny proteinina hita eo amin'ny toeran'ny viriosy, toy ny fanaovana fitiliana antigène.
Ny fitsapana Rapid PCR dia tokony ho lasa manara-penitra ao anatin'ny 24 ora amin'ny dia iraisam-pirenena, ary azo alaina eny amin'ny seranam-piaramanidina rehefa manamarina sidina iraisam-pirenena, araka ny thdia World Tourism Network vaovao fanolorana
Miaraka amin'ny fomba fiasa toy izany dia lasa tena zava-misy kokoa ny tenin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO hampiasa ny famerana ny fivezivezena ho fomba farany.
Raha tsy misy izany, ny firenena tsirairay dia hisintona ny fiatoana maika mba hiarovana ny olom-pireneny. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, tara loatra izany, na dia vita ao anatin'ny iray na roa andro aza, na rehefa miandry ny fahazoana tsipika vaovao.
Hoy ny filohan'ny WTN Dr. Peter Tarlow:
“Mila mianatra avy amin'io toe-javatra io isika. Tsy misy fotoana hatahorana, mila mampiasa ny atidohantsika isika ary mitondra ity indostria ity, fahasalamana ary governemanta amin'ny pejy iray ihany. ”
Ity fomba fiasa ity dia mitaky ezaka goavana amin'ny lafiny rehetra. Ny firenena, anisan'izany i Arabia Saodita, dia nitarika ny Word Tourism ary nametraka ny vola tao ambadiky ny hevitra tsara.
Fotoana izao hampiasana vola amin'ny fampiharana rafitra iray, ka mahatonga azy io ho hita na aiza na aiza manerana izao tontolo izao.
Ilaina izany, mba ho voaro isika rehetra, ary mba hahazoana antoka fa hiroborobo ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany na dia mipoitra aza ny fandrahonana ara-pahasalamana vaovao mifandraika amin'ny COVID.